I-Oppo A7 Iinkcukacha ezigcweleyo zivulekile | I-Androidsis
Iimpawu ezipheleleyo ze-Oppo A7 zityhiliwe: 6.2, HD + Umboniso, i-SD450 kunye nokunye
Ukulandela ukumiliselwa kwakutsha nje kwe Na A7X, eyenzeke malunga neeveki ezimbini ezidlulileyo, umenzi waseTshayina uceba ukusizisela ingxelo elula, eneempawu kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezifanayo. Uluhlu olusezantsi, nangona ezinye zeempawu ezinomdla. Sithetha nge-Oppo A7.
Nangona le mobile isebenza kancinci, unamandla aliqela ukuba, ngaphandle kwamathandabuzo, tsala umdla, njengescreen esiphetheyo, esinobukhulu obukhulu kunye nomlinganiso weslim slim, kunye nomthamo webhetri.
Ngokwendlela iqela le I-SlashLeaks (/ ukuvuza) Izise ukukhanya, isiphelo sendlu elandelayo sika-Oppo siza sixhotyiswe ngepaneli ye-In-Cell ye-6.2-intshi ene-HD + isisombululo se-1.520 x 720 pixels (19: 9). Emngxunyeni, iprosesa ye-octa-core Snapdragon 450 evela kwiQualcomm kunye neAdreno 506 GPU yile nto ixhotyiswe ngayo. Kwangelo xesha, ine-3/4 GB ye-RAM, i-32 GB yendawo yokugcina yangaphakathi -yandiswa nge-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-256 GB- kunye nebhetri ye-4.230 mAh.
Isixhobo esine-smart sinemodyuli emibini yekhamera ngasemva, equlethwe ngabenzi boluvo babini besisombululo se-13 kunye ne-2MP. Oku kunokuvuleka kuka-f / 2.2 kunye no-f / 2.4 ngokwahlukeneyo. Okwangoku, ngaphezulu kwescreen kukho i-16MP shooter ene-f / 2.0 aperture, eya kuthi ngokuqinisekileyo ikufezekise ukuthatha iifoto ezilungileyo kuthi.
Okokugqibela, ukuvuza kuphakamisa oko I-Android 8.1 Oreo phantsi kweColorOS 5.2 yile nto iza kuqala ifakwe kwi-A7. Ngaphandle koko, ubungakanani be-smartphone yi-155.9 x 75.4 x 8.1 mm, ubunzima bayo buyi-158 yeegram kwaye iya kufika kwimarike kwiGlaze Blue nakwiGlaring Gold. Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba inenkxaso ye-nanoSIM ephindwe kabini, i-Bluetooth 4.2, i-Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 a / b / g / n, i-OTG, i-GPS, i-GPS, i-GLONASS, i-Beidou ne-Gallileo, nangona ingenayo iteknoloji ye-NFC ukwenza iintlawulo .
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iimpawu ezipheleleyo ze-Oppo A7 zityhiliwe: 6.2, HD + Umboniso, i-SD450 kunye nokunye
Kutheni ifowuni yakho ye-Android ingabizi kakuhle?